Slovakia (Slovakia: Slovensko [slɔʋɛnskɔ] (ku saabsan codkani wuxuu dhageysanayaa)), si rasmi ah Jamhuuriyadda Slovakia (Slovak: Slovenská republika, About Codkani waa dhagaystaa (caawimo · macluumaad)), waa waddan aan debedda lahayn ee Bartamaha Yurub.
Waxaa xuduud u leh Boland, waqooyiga, Ukraine ee bari, Jamhuuriyadda Czech dhinaca galbeedka, Hungary ee koonfurta, iyo Awstaraal ilaa koonfur galbeed. Gobalka Slovakia ayaa ku yaal qiyaastii 49,000 oo kiilomitir oo isku wareeg ah (19,000 sq m) iyo badana waa buur. Dadku waxay ka badan yihiin 5.4 milyan waxayna ka kooban yihiin inta badan Slovakal. Caasimadda iyo magaalada ugu weyn waa Bratislava, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waa Košice. Luuqadda rasmiga ah waa Slovak.
Slavs ayaa yimid dhulalka Slovakia ee hadda ah qarniyadii 5aad iyo 6aad. Qarnigii 7aad, waxay door weyn ka ciyaarayeen abuuritaanka Boqortooyada Samo, qarnigii 9aadna waxay aasaaseen Mabaadi'da Nitra. Qarnigii 10aad, dhulku wuxuu ku biiray Boqortooyada Hungary. Ka dib Dagaalkii Dunida ka dib iyo burburinta Boqortooyada Australiya-Hungarian, Slovakha iyo Czech waxay aasaaseen Czechoslovakia (1918-1939). Jamhuuriyadda Slovakia (1939-1945) ayaa ka jirey Dagaalkii Dunida II ee macaamiisha Nazi Jarmalka. Sanadkii 1945kii, Czechoslovakia dib ayaa loo dhisay waxaana hoosta ka ahaa xukunkii Communist noqday dayax-gacmeedka Soviet. Sannadkii 1989, xukunka Velvet wuxuu joojiyay xukunkii Communist ee Czechoslovakia. Slovakia waxay noqotay waddan madaxbannaan 1dii Janaayo 1993 ka dib markii si nabadgelyo ah looga furtay Czechoslovakia, mararka qaarkood loo yaqaano furfurnaanta foosha.
Slovakia waa dhaqaalaha sare ee dakhliga sare leh Heer aad u sareeya ee Horumarinta Aadanaha, heer aad u sarreeya oo nool oo si fiican u qabta cabirrada xoriyada madaniga ah, xorriyadda saxaafadda, xoriyadda internetka, dimuquraadiyadda maamul iyo nabadgelyo. Wadanku wuxuu heystaa isku-dhafka dhaqaalaha suuqa oo leh nidaam ammaan oo dhameystiran. Muwaadiniinta Slovakia waxaa la siiyaa daryeel caafimaad oo caalami ah, waxbarasho bilaash ah iyo mid ka mid ah fasaxa hooyada ee ugu dheereeya ee OECD. Wadanku wuxuu ku biiray Midawga Yurub 2004 iyo Euro-da 1dii Janaayo 2009. Slovakia sidoo kale waa xubin ka tirsan Aagga Schengen, NATO, Qaramada Midoobay, OECD, WTO, CERN, OSCE, Golaha Europe iyo Kooxda Visegrád. In kastoo sinnaan la'aanta gobolka ee heerkeedu sareeyo, 90% muwaadiniinta ayaa leh guryahooda. Slofaakiya (sk: Slovensko) waa wadan ku yaalo qaarada Yurub.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Islofaakiya&oldid=222736"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Nofeembar 2021, marka ee eheed 07:46.